Ngaba iTekhnoloji iyenza okanye ikhubaze ukuThengisa kwakho? | Martech Zone
Ngaba iTekhnoloji iyenza okanye ikhubaze ukuThengisa kwakho?
NgoMvulo, Novemba 10, 2008 NgoLwesine, uJuni 11, 2015 Douglas Karr
Emva kokusebenza kwiSoftware njengenkonzo kule minyaka ilishumi idlulileyo, uninzi lokuthandwa kwayo luvela kwinkampani ekungafuneki ukuba isebenze kwisebe layo le-IT. "Logama nje kungafuneki ukuba uthethe nabafana bethu be-IT!", Yimantra endiyiva rhoqo,"Baxakekile!".
Isicelo ngasinye senziwa ngoku inkqubo yangaphakathi kwaye emva koko yadibana nezizathu ezingama-482 zokuba kutheni Ayikwazi mayenziwe. Okumangalisayo kukuba, aba ngabantu abafanayo abafumana ngokwenene wacasulwa xa ujonge ngaphandle isisombululo!
Kubuza umbuzo, ngaba isebe lakho le-IT liyenza ukuba iinzame zakho zentengiso okanye likhubaze? Ukuba ungumlawuli we-IT, ngaba uyasebenza yonke imihla ukunceda abathengi bakho okanye uyabakhanyela?
Ukuba nayiphi na impendulo yeyokugqibela, yindlela ephazamisayo endikholelwa ukuba iyakhula. Ngakumbi nangakumbi abathengisi endibaziyo banjalo ndidiniwe neSebe labo le-IT. Kwishishini elinye endikhe ndasebenza kulo (elalibamba uninzi lweeseva zewebhu), siphumile sathenga iphakheji yokubamba yangaphandle.
Lixesha lokutshintsha! Icandelo lakho le-IT kufuneka libe ngumsebenzi kunye nawe futhi kunceda Itekhnoloji eyimfuneko yokuqhuba ishishini lakho.
Nantsi indawo enkulu evela UHugh MacLeod ngesihloko:
Nov 10, 2008 ngo-9:40 PM
Ndonwabele ukuqhuba itekhnoloji kunye nokusebenza kuqalo oluninzi. Iziqalo ezikhula ngokukhawuleza kakhulu ezineemfuno ezinkulu zokuthengisa. Ukuba bekungengomsebenzi wentsebenziswano phakathi kweqela letekhnoloji, ii-ops, ukuthengisa, kunye ne-biz dev… kulungile akukho nto ibinokwenzeka.
Intsebenziswano kufuneka yenzeke kwaye IZIXHOBO ZOKUSEBENZA kufuneka kwabelwane ngazo. Isizathu sokuba uninzi lwe-IT luza kukunika izinto ezininzi ezimbi ngolu hlobo lulandelayo (ubuncinci kumava am):
1. Uninzi lohlahlo lwabiwo-mali lwetekhnoloji luxinene kakhulu. Akukho ndawo yokuphefumla. Uzisa enye into eya kubiza izibonelelo, kodwa UYAPHUMELA ukuzisa nantoni na etafileni kodwa ucela, anisebenzi njengeqela kwaye ukubawa kwakho kuyonakalisa inkampani. Ufuna into - yihlawulele. Izixhobo zobuchwephesha azisimahla.
2. Abantu be-IT abazozidenge. Ukuba ubaphatha ngolo hlobo, baya kuphinda bakuphendule. Oku bubomi. Kungoyena mdla wenkampani ukuba utyale ixesha ekuqinisekiseni ukuba abantu be-IT banokuqonda okupheleleyo kwefuthe leeprojekthi zakho. Cela igalelo kwaye uya kufumana intsebenziswano.
Itekhnoloji yeshishini ingundoqo kwimveliso kunye nokusebenza ngempumelelo kwabasebenzi. Ukuyiphatha nayiphi na into engaphantsi koko kukucinga kakubi.
Kwaye okokugqibela, iiprojekthi zetekhnoloji ezibonakala zilula kwii-non-techies zihlala zinzima kakhulu ukuzifeza. Kwaye iiprojekthi ezinzima zinokuba nesisombululo esilula kakhulu. Sebenzisana neqela lakho. Ukuba ukhetha ukwenza iisilos, kunokuba kufuneka ulindele iziphumo ezibi.
Kufuneka kubekho umntu omnye osuka kwi-IT yakho KUYO YONKE intlanganiso yokuthengisa. Yiloo nto endihlala ndiyithethelela.
Nov 11, 2008 ngo-12:37 PM
Apollo, ngelixa ndivumelana nayo yonke into oyithethileyo, andicingi ukuba ukuqiqa sisizathu sokuba i-IT ingasebenzi. Ixesha elide nelifutshane liza kwiinjongo zoshishino. I-IT kufuneka ihambelane neenjongo zokugqibela zeshishini ayikho malunga ne-IT malunga neshishini.
Ngokubhekiselele kubantu be-IT bangabi zizidenge kwaye akufanele baphathwe ngolo hlobo, ndiyavuma. Kodwa kwakhona luxanduva lweenkokeli ze-IT ukutshintsha inkangeleko yesebe lakhe kwaye ziqinisekise ukuba abantu bakhe abaphindi baziphathe kakubi.
Kuthatha ubunkokeli bokwenyani kwi-IT ukwenza isebe le-IT elilungileyo. Inkokeli kufuneka iphume kwindima ethi "Ndiyi-tech guru" kwaye inxibe "Inokukunceda njani i-IT namhlanje?" umnqwazi. Kungenxa yokuba i-IT kufuneka ibandakanyeke kwintlanganiso ayithethi ukuba uya kuba ngaphandle kokuba uphumelele ixabiso le-IT kwaye utshintshe imbono ye-IT.
Kuxhomekeke kwinkokeli ye-IT ukwenza isebe le-IT libe luncedo kwaye oko kuthetha ukutshintsha indlela eyenziwa ngayo kunye ne-IT malunga nayo. I-IT ayithethi malunga neteknoloji imalunga neshishini kunye nokwenza ishishini lenzeke.
Nov 10, 2008 ngo-11:09 PM
Kumava am iSebe le-IT liye lavala uninzi lweenkqubo zokuthengisa.
Unyanisile… Lixesha lotshintsho!
Nov 11, 2008 ngo-12:24 PM
Ukuba yiCIO yenkampani ekwafuneka isebenze kunye neenkampani ezibhiliyoni zeedola ibe ngamava am ukuba amasebe amaninzi e-IT aya kudubula into ethile kuba engafuni ukujongana nayo. Kangangeminyaka bendixelela abaqeshwa bam, oontangandini nabaphathi ukuba ukuba bafuna into entsha, i-IT kufuneka ibe yinto ebangela ukuba ingabi sisiphene!
Kubasebenzi bam oko kuthetha ukumamela isicelo, ukuba abaphathi babegqibe ekubeni yiprojekthi ekufuneka yenziwe- yenze. Ilula ngolo hlobo. Ukuba banokuyiphucula inkqubo yokwenza kube lula, ngokukhawuleza, kwaye kungabizi kakhulu ukuyiphakamisa! Khangela loo mathuba.
Koontanga bam kwakuthetha ukuba kufuneka bavuleleke kwiimbono ezingaphandle kobuchule babo kwaye kufuneka bazimisele ukucacisa iingxaki zabo ngokwemigaqo enokuqonda itekhnoloji kunye nokunceda.
Kubaphathi bam oko kwakuthetha ukwamkela utshintsho, ukuxhasa kunye nokuxhobisa i-IT apho ifuneka khona kwaye okona kubaluleke kakhulu ukulungelelanisa izinto eziphambili ze-IT kunye neenjongo zoshishino ezifana nokuqinisekiswa komgangatho, ukusebenza kakuhle kwemveliso kunye nokuqonda ukuba ngelixa i-IT yayingengomvelisi wengeniso inokongela inkampani imali eninzi ngonyaka. kunokuba ichithe. Akunyanzelekanga ukuba ibe lixabiso kuphela.
Kungenxa yokuba “ibingekho kuhlahlo lwabiwo-mali” yayingesosizathu esaneleyo sokungaphumezi ukonga iindleko, inkqubo yokuphucula ukusebenza kakuhle. Oko kwakuthetha ukuba kufuneka sibeke phambili iiprojekthi zethu kwaye sibuyisele into emva.
Nov 12, 2008 ngo-11:25 AM
Asiyonto nje ye-IT-abafana abanokuthi bakhubaze imizamo yokuthengisa ngetekhnoloji entsha. Ngamanye amaxesha uye wabalekela kubathengisi abanokwala itekhnoloji entsha, kuba banokuyibona njengesongelo kwindima yabo yobuchwephesha.
Ndiyakholelwa ukuba nabani na obandakanyekayo ekuthengiseni kufuneka bazilungise kwi-teknoloji entsha ehlakaniphile kunye neendleko. Abo bangajonganiyo ngokuqinisekileyo namaxesha anzima kunalawo ajongana nawo.
Nov 12, 2008 ngo-6:56 PM
Ndiyakholelwa ukuba uPeter Drucker wayenesicatshulwa kanye esithi, "Kwenzeke ntoni ku 'Mna' kwi-IT?" Ugqaliselo lwe-IT lukwitekhnoloji kwaye ibisoloko ikho. I-IT ayifane isebenzise ulwazi okanye abantu bonxibelelwano, okanye abantu ukuba baququzelele iinguqulelo ze-IT. Ukubeka nje, amaninzi amasebe e-IT kufuneka abizwe ngokuthi "HelpDesk" okanye "iSebe le-imeyile".
Nov 12, 2008 ngo-11:07 PM
Kwaye "Inkxaso yeFowuni", nayo!
Meyi 29, 2013 kwi-9: 12 AM
UPeter Drucker wabhala inqaku elikhulu 10 okanye kwiminyaka eyadlulayo. Yathi abashicileli benziwa iiNkosi kunye neeBarons ngexesha lenguqu yolwazi yangaphambili kuba banikwa ikhredithi ngempazamo ngolwazi olwenziweyo. Ngokuhamba kwexesha baye baba yikhola eluhlaza kakhulu, babonwa njengamagcisa ngaphezu kwabadali bokwenyani.
Iinkampani ezininzi ziqhutywa ngokungazi ngamasebe abo e-IT ethatha isigqibo sokuba yintoni enokwenziwa kuqala.
Dibana kanye ngenyanga, okanye rhoqo emva kweeveki ezimbini, kwaye abantu abaqhuba inkampani kufuneka babeke izinto eziphambili. Emva koko xelela wonke umntu, kubandakanywa ne-IT, into abayiyo. Qinisekisa ukuba izinto ezibalulekileyo ziyenziwa, kwaye, ngokulinganayo, yintoni engazukwenziwa kule nyanga.
Ukuba uvumela i-IT ukuba ibeke phambili, ubenza iiNkosi kunye neeBarons. Bafanele baxatyiswe kakhulu ngokwenza kunye nokuxhasa umbono weenkampani zakho, kodwa ukusilela ukubeka phambili kubo, kunye nokusilela ukuxelela abasebenzisi into engazukwenziwa, kuyasilela ukukhokela inkampani yakho.
Meyi 29, 2013 kwi-10: 33 AM
Ndivuma ngokupheleleyo, @facebook-1229758293:disqus!